Pétition en ligne mettons fin à l'exclusivité western union/mvola pour les transferts vers madagascar
Malagasy en France
Mettons fin à l'exclusivité Western Union/Mvola pour les transferts vers Madagascar
Destinataire : Malagasy rehetra
Western Union & Mvola
Nandritra ny taona maro dia niarahantsika nahita fa Western-Union dia anisan’ny orinasa goavana nisahana ny fandefasana vola mankany Madagasikara. Ankehitriny anefa, maro ihany koa ireo orinasa vaovao izay vao misondrotra eo amin’ny tsena iraisam-pirenana ary maniry ny hanasoa sy hanome fahafaham-po ny Malagasy amin’ny tolotra izay arosony, izay tena mora kokoa ho anao sy ny ankohonanao.
Ny olana anefa ankehitriny dia ny fifanarahana tsy aran-drariny misy eo amin’ny Mvola sy Western-Union, izay tsy ahafahan’ny ankamaroan’ny Malagasy monina an-dafin-driaka misitraka ny tolotra mora sy malaky izay omean’ireo orinasa hafa. Indrindra fa ireo izay mandefa vola amin’ny havany aman-tsakaizany amin’ny Mvola.
Tsy inona moa izany fifanarahana izany fa ny tsy fahafahan’ny Mvola miara-miasa amin’ireo orinasa hafa fandefasana vola mankany Madagasikara “clause d’exclusivité” ary nataony ho mandritra ny fotoana tsy voafaritra izany “durée indéterminée”. Io karazana fifanarahana io anefa dia tsy ara-dalana tokoa ary tsy nahazoana alalana avy amin’ny an-kilany.
Ankehitriny, manasa sy mandrisika antsika rehetra hanao sonia ity fangatahana ity mba ahafahantsika manova zavatra maro sy mampitsahatra ny fanamparam-pahefana izay ataon’ny Western Union amin’ny Mvola raha itantsika fa tsy rariny izany.